Kismaayo News » Saacid iyo Sanbalooshe hadii la burshay, Islow muxuu sugaa?
Saacid iyo Sanbalooshe hadii la burshay, Islow muxuu sugaa?
Kn: Ayadoo ay qaraxyadu ku soo badanayaan Muqdisho isla mar ahaantaana uu xajmigoodi sii xoogaysanayo ayaa maanta golaha wasiirada oo yeeshan kulan aan caadi ahayn waxay xilka uga qaadeen taliyihii Booliska Cabdixakiin Daahir Saacid iyo taliyihii Nabadsugidda Cabdullahi Maxamed Cali Sanbalooshe. Labada masuul ayaa lagu eedeeyay xil gudasho la’aan.
Habacsanaanta amniga ku yimid iyo masiibooyinkii is xigay ee ka dhacay Muqdisho way tahay in dawladdu kula xisaabtanto masuuliyiinta shaqada ku leh dabadeed la marsiiyo mudnaantooda, laakiin marka laga tago sharciga la baal maray ee labada masuul xilka looga qaaday taasi oo markii hore tikareeto madaxweyne lagu magacaabay hadeerna hadaysan ayagu is casilayn ay ahayd in tikareeto madaxweyne lagu cayriyo ayaa arinta maadsiga leh waxay tahay in wasiirkii dhannaa ee masuuliyadda amnigu saarnayd uusan xilka ka degin oo waliba uu door muhiim ah ka ciyaaro buriska labada masuul.
Way haboon tahay hadaan shaqsigu isbadal samayn karin inuu dadka ka hor leexdo oo uusan shacabka lug-goynin. Qaraxyada sii kordhaya ee caasimadda ka dhacaya iyo khasaaraha ka dhashay ma aha mid shacabka lagu qancin karo shaqsi ama laba xilka laga qaaday ee waxa ay rabaan waa hogaamin dhab ah oo dadka iyo dalka lagu badbaadinayo. Hadiise ayba tahay in qof loo cayriyo dhibaatooyinka dhacaya waxay ahayd in laga bilaabo wasiirada Amniga Maxamed Abukar Islow.
Waxaa amaan mudan wasiirkii Gaashaandhigga iyo taliyihii ciidanka Qaranka oo markay arkeen inaysan xal iyo isbadal keeni karin sababtay dooniba ha keenteen, dadka ka hor leexday oo xilka iska dhiibay. Dadka qaar ayaa waxay u saarinayaan eriska labada masuul inay ka danbaysay waraysi uu maalin hore Sanbalooshe siiyay wargayska New York Times taasi oo uu ku dhaleeceeyay beesha caalamka iyo doorka ay ka qaadanayso dhinaca iswaydaarsiga macluumaadka qaraxyada, asagoo si xanaaq ku jiro u yiri “Soomaaliya in loo ooyo uma baahna ee waxqabad bay u baahantahay”. Waraysigaasi waxaa loo aanaynayaa inuu yahay sababta keentay in xilka laga xayuubiyo Sanbalooshe halka Saacidna loo sii maray si ayna waji kale u yeelan.
Hadaba su’aashu waxay tahay, Saacid iyo Sanbalooshe haday tagaan Islow muxuu sugaayaa?